अन्तरवार्ता – Banking Khabar
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ ? यस मौद्रिक नीतिले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानको लागि सकारात्मक ढङ्गबाट प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिन्छ । मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघि देखि नै बजारमा मर्जर तथा एक्विजिसनको हल्ला भएको थियो, कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई र्फोसफुल ढङ्गबाट एकिकृत गर्ने त
‘सानो बैंकको सिइओ हुनु भन्दा ठुलो बैंकको सानो पद समाल्नु राम्रो’
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान बैंकहरुलाई आग्रह गरेसँगै ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले मर्जरका लागि सहमति गरे । मर्जर पश्चात ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)का रुपमा जनता बैंकका सिईओ पर्शुराम कुवँर जाने सहमति भइसकेको छ । तद्पश्चात कुँवरलाई बैंकिङ क्षेत्रका ‘भाग्यमानी सिईओ’ का रुपमा लिइन्छ । दुबै बैंक मर्जरमा गएपछिको
“बैंकको ब्यवहारमा भर पर्छ बिग मर्जर पश्चात फोर्स मर्जर नीति”
लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ खबर । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’ को चर्चा चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अगाडी मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता जनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएसँगै ‘बिग मर्जर’ ले प्राथमिकता पाएको हो । विष्लेशकहरुले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा जबर जस्ती ‘फोर्स मर्जर’ लाद्न
नेपालमा बीमाको इतिहासलाई हेर्दा बीमाको शुरुवात २००४ सालबाट “नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड” को स्थापना संगै भएको हो । बीमा व्यवसायको शुरुवात नेपालमा ७ दशक अगाडी नै भएको भएता पनि आज सम्म बीमाको पहुँच उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन् । आज पनि मानिसहरुमा बीमा सम्बन्धी धेरै अन्योल्ता कायमै रहेको पाइन्छ । बीमा के
‘मौद्रिक नीति आउनु अघि नै मर्जर प्रतिवद्धता सम्भव छैन’-ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना
बैंकिङ खबर । ‘बिग मर्जर’ को बिषय पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति बैंक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर नै नीति सार्वजानिक गर्ने तयारी गरेको जनाउ गरिसकेको छ । असार अन्तिम साता मौद्रिक नीति सार्वजानिक हुने निश्चित भइसकेको छ । यसैबीच, मौद्रिक
लघुवित्तको संख्या धेरै भयो, बिग मर्जर यो क्षेत्रमा आवश्यक छ– प्रकाशराज शर्मा
बैंकिङ खबर । नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र शुरुवाती समयबाट नै केही न केही समस्याले ग्रसित छ । समस्या ग्रस्त वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्र भने सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । लघुवित्त संस्थाहरुले स्वत सुधारको बाटो पहिलाएका भएता पनि केहि समस्याहरु यस क्षेत्रमा पनि रहेका छन् । ग्रमिण भेगका जनतालाई वित्तीय सेवासंगै दुर्गम क्षेत्रहरुमा वित्तीय
बीमा पोलीसीहरु सबैले बुझ्ने बनाउनुपर्छ : भोजराज शर्मा, बीमा विज्ञ
बीमाको सुरुवात भएको लामो समय भइसक्दा पनि नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार हुन सकिरहेको छैन । मानिसहरुमा बीमा शिक्षा कमी भएता पनि नेपाली बीमा बजार पछिल्लो समयमा फस्टाउँदै आएको छ । जसको कारण भनेको अनिवार्य बीमा हो । सहरमा भन्दा पनि गाउँमा बीमा शिक्षा अत्यन्त कम छ । त्यसकारण बीमा शिक्षा बढाउनका लागि बीमा समिति र
नेपालमा बीमाको सुरुवात भएको सात दशक भन्दा लामो समय भइसकेको छ । बीमाको सुरुवात भएको लामो समय भइसक्दा पनि बीमाको पहुुँच खासै विस्तार हुन सकेको छैन् । अधिकांश मानिसलाई बीमाको बारेमा जानकारी नै छैन भने केही मानिसहरुले पनि बीमालाई खासै रुचाएको देखिदैन । नेपनलमा बीमा गर्नेको संख्या न्यून मात्रै रहेको छ । बीमा गर्नेहरुमा पनि
‘वित्तीय साक्षरता विकासमा लघुवित्तले खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन’: रामबहादुर यादव
बैंकिङ खबर । अहिले लघुवित्त वित्तीयसंस्थाको स्तरउन्नतीको चर्चा चलिरहेको छ । सेवा मुलक संस्थाको रुपमा विकास हुनुपर्ने लघुवित्त क्षेत्र नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा विकास भइराखेको टिप्पणिपनि हुने गरेको छ । नेपालमा लघुवित्तले गर्ने काम, कार्यक्षेत्र र वित्तीय साक्षरताका विषयमा निभाएको भूमिकामा आधारीत रहेर बैंकिङ खबरले नेपाल माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसियसनका सचिब तथा नेशनल माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका प्रमुख
“नियामक निकायहरुको नकारात्मक टिप्पणीले लगानीकर्ता निराश बन्दा बजार प्रभावित” हरिश दाहाल
पछिल्लो केहीदिन यता शेयर बजारमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ । परिसूचक केही बढेको छ । घट्दो बजारमा करेक्सनको रुपमा लिने या बजारले रुप परिवर्तन गरेको रुपमा लिने भन्ने विषयमा अझै लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेको देखिदैन् । यसै सन्दर्भमा शेयर लगानीकर्ता संघका सचिव हरिश दाहालसँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीः शेयर बजार लामो सयय देखी
बैंकिङ खबर । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा महिला कर्मचारीहरु धेरै छन् । तर नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने अवसर भने कमैले पाएका छन् । अहिले पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा माथिल्लो तहमा बसेर काम गर्ने महिलाहरु कम देखिन्छन् । तर मेगा बैंक एउटा यस्तो बैंक छ जसको व्यस्थापन समुहको माथिल्लो दुई तहमा महिला कर्मचारी छन् ।
बैंकिङ खबर। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा पनि विकास बैंकहरुमा त्ययसको खासै प्रभाव परेको देखिदैन । वाणिज्य बैंकहरुले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएर कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् तर विकास बैंकहरुले भने धमाधम कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । यसै सन्र्दभमा समग्र विकास बैंकहरुको अवस्था र कामना सेवा विकास बैंकको आगामी रणनीति लगायतका
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रले पारेको प्रभावका बारेमा २ प्रकारको विश्लेषण हुँदै आएको छ । दुई तिहाई प्राप्त शक्तिशालि सरकारले जारी गरेको स्वेत पत्रका आधारमा सरकार सँगको अपेक्षा र त्यसले पारेको प्रभाबका बारेमा गहिराईसम्म पुगेर चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ । उत्पादन, ब्याजदर, नयाँ लगानी, निक्षेप लगायतका विषयलाई हेर्दा चित्त बुझाउँन सक्ने अबस्था नरहेको जानकारहरुले
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा उल्लेख भएका विषयले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ – दिपेन्द्र बाँस्कोटा
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । जसले गर्दा बैंकर्सहरुले पनि समिक्षामा उल्लेख भएका केही विषयहरु लागु भएमा बैंकको नाफामा उच्च गिरावट आउने बताइरहेका छन् । यसको प्रभाव शेयर बजारमा देखिने चर्चा समेत हुँदै आएको छ । त्यसैले हामीले ब्याजदरमा भएको परिवर्तन र बैंकको नाफामा अउन सक्ने गिरावटले शेयर
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएपछि ब्याजदर उच्च हुँदै गएको छ । बैंकर्स संघले ब्याजदरमा एककिसिमको सहमति गरेको छ । यसले कतिपय बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्न र आफुसँग भएको निक्षेप समेत जोगाउन समस्या परिरहेको देखिन्छ । बैंकहरुमा यस्तो समस्या पटक पटक किन आइरहेको छ र कहिले सम्म ब्याजदरको